सुजिता मृत्यु : दाई नातापर्नेसंग प्रेम परेपछि यस्तो योजना बनाइन्, घटनाको दिन के भयो ? – Kavrepati
Home / समाचार / सुजिता मृत्यु : दाई नातापर्नेसंग प्रेम परेपछि यस्तो योजना बनाइन्, घटनाको दिन के भयो ?
admin July 23, 2021	समाचार Leaveacomment 792 Views
काठमाडौ । चितवनकी सुजिता भण्डारी मृत्यु घटनामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका ब्यक्ति सुजिताकै दाई नाता पर्ने हुन् । प्रहरीले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी ति ब्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मलेन गरी झापाको झापा गाउँपालिका(६ का २३ वर्षीय सचिन भन्ने सुकदेव भण्डारीलाई सार्वजनिक गरेको छ । उनलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट बिहीबार पक्राउ गरेर चितवन लगिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार उनी सुजिताका काकाका छोरा हुन्। नाताले दाई पर्छन । उनीहरूको सम्बन्ध दाजुबहिनीको मात्रै सीमित नरही शंकास्पद देखिएको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ । सुजिताले असार ९ गते सुकदेवलाई फोन गरेको देखिएको छ । उनले विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्दा सुकदेवले इन्कार गरेपछि घटना भएको प्रहरी अनुसन्धानवाट देखिएको छ ।
ुनेपालमा संगै बस्न नैतिक र सामाजिक रुपमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले विवाह गरेर विदेश जाने योजना समेत उनीहरुले बनाएको अनुसन्धानवाट देखिएको छ । त्यसका लागि काठमाडौमा संगै बसेर उनीहरुले विदेश जाने योजना बनाएका थिए । सम्भव भएसम्म विदेश जाने र सम्भव नभए एकआपसको अ प ह र ण को बहाना बनाएर कसैले थाहा नपाउने ठाउँमा गएर बस्ने योजना बनाएको खुलेको छ पत्रकार सम्मेलनमा इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीका डिएसपी ईन्द्रबहादुर रानाले जानकारी दिएका छन् ।
गत असार ९ गते सुजिताले सचिनलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा विवाद भएको थियो। सुजिताले ‘विवाह नगर्ने भए म म र्छु’ भनेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रानाले बताए। त्यसपछि उनीहरूबीच कुनै संवाद भएको थिएन। असार ११ गते एक्कासि हराएकी सुजिताको असार २० गते चितवनको जंगलमा शव फेला परेको थियो।
Previous जोन्सनको खोप लगाउनासाथ धादिङमा एक जनाको मृत्यु
Next अमरिकामा रो’मान्टिक मुडमा गायिका अन्जु पन्त